Warbixin: Noloshiisii Carruurnimo, Bilowgii Xirfaddiisa, Murugooyinka + Hayaankii Guulaha Bilow Illaa Dhamaad Ee Gigi Buffon – GOOL24.NET
Warbixin: Noloshiisii Carruurnimo, Bilowgii Xirfaddiisa, Murugooyinka + Hayaankii Guulaha Bilow Illaa Dhamaad Ee Gigi Buffon
May 16, 2018 Live User
Gianluigi Buffon, xirfaddiisa cajiibka ah, waxay toddobaadkan gelaysaa heer cusub iyo wakhti uu u gudbayo da’da odaynimda rasmiga ah.
Buffon oo dhowaan u dabbaal-degay sannad-guuradiisii 40aad ee dhalashadiisa, waxa uu Khamiista shir jaraa’id ku shaacin doonaa inuu gebi ahaanba ka fadhiisinayo kubadda cagta, kulankiisa ugu dambeeyana uu safan doono Axadda oo Juventus ay iska hor iman doonaan Hellas Verona. Isla marka uu shaadhka siibo, waxa xilkiisa la wareegi doono goolhayihii hore ee Arsenal ee Wojciech Szczesny oo in badan oo xili ciyaareedkan ah goolka hayey maadaama uu muddo laba bilood ah dhaawac ku maqnaa Buffon.
Kulanka Hellas Verona, waxay reer Juventus u soo lebbisanayaan garoonka iyagoo maanka ku haya inay sii sagootiyayaan dibna aanay u arki doonin ruug caddaagooda Buffon oo xidhan garanka kooxda uu muddada dheer difaacayay, balse kulankiisii ugu dambeeyey uu xidhnaananayo.
Shabakadda ciyaaraha ee Gool24, ayaa warbixintan waxay ku eegaysaa xirfaddiisa, halkii uu kasoo bilaabay, sidii uu kusoo baxay, kooxihii uu usoo ciyaaray iyo halgankii uu usoo galay inuu kaalinta koowaad ahaado.
Xirfaddiisa kubadda cagta waxa uu kasoo bilaabay naadiga Parma oo kulankii ugu horreeyey uu u saftay November 1995.
Gianluigi Buffon oo u ciyaaraya Parma 1995 isagoo 17 jir ah
Kulankiisa ugu horreeya ee heerka koowaad, waxa uu ugu bilaabmay naadi weyn, waxaana uu Parma goolka u galay ciyaar ay kaga hor yimaaddeen AC Milan, iyadoo ay da’diisu ahayd 17 jir.
Wakhtigaas, Xattaa muu haysanin liisanka wadista baabuurta, balse waxa uu ku guuleystaay in ciyaartooyada AC Milan uu ka difaaco goolkiisa. George Weah iyo Roberto Baggio ayaa afka hore uga ciyaarayey Milan, hase yeeshee, Buffon ayaa sida shabeelka ugu booday kubbad kasta oo ay kusoo ganeen, waxaanay taasi keentay in indhaha dunida kubadda cagtu ay mar kaliya tooshka ku shitaan.
Buffon waxa uu sannadkii 1995 ku biiray xulka qaranka Talyaaniga ee 21 jirada
Xili ciyaareedkii xigay oo ahaa 1996-97, waxa uu noqday goolhayaha koowaad ee kooxdii tababare Carlo Ancelotti oo dirqi uu kaga baxsaday horyaalka Serie.
Waxa markaas u bilaabmay wakhti wanaagsan, waxaanu nasiib u helay in lagu daro xulkii qaranka Talyaaniga ee Koobkii Adduunka 1998 oo uu ahaa goolhayaha saddexaad iyadoo ay da’diisu ahayd 20 jir.
Ma aha layaab inuu yahay xirfadle da’yaraan caan ku noqday, sababtoo ah waxa uu ka dhashay qoys ku abtirsada ciyaaraha. Aabbihii wuxuu ahaa ciyaartoyg qaada miisaanka culus, halka hooyadii ay ka qayb-geli jirtay tartamada tuuryada qoriga.
Buffon oo u ciyaaraya Purma 1999
Laba hablood oo ay walaalo yihiin, Veronica iyo Guendalina, waxay u ciyaareen xulka qaranka Talyaaniga ee kubadda Volley-ball-ka, halka Dante Masocco oo ay ilmo adeer yihiin uu kubadda Basketball-ka ciyaaro.
Awowgii oo adeer u ahaa aabbihii waxa la odhan jiray Lorenzo, waxa uu ahaa goolhayihii ugu caansanaa ee taariikhda AC Milan iyo Inter Milan, waxaanu wacdaro ka dhigay xulka qarannka Talyaaniga.
Buffon intii aanu Parma ka tegin, waxa uu u ciyaaray 168 ciyaarood, kaddibna sannadkii 2001 ayuu lacagtii ugu badnaa oo ahayd £46 milyan ugu wareegay Juventus, illaa haddana isaga ayaa ah goolhayaha ugu qaalisan dunida.
17 jir markii uu ahaa rikoodhkii uu dhigay ayaa illaa hadda yaalla, kaas oo ah xirfaddiisii cajiibka ahayd ee uu Parma ugu ogolaaday inay ka mid noqoto naadiyada sare ee hormoodka ka ah horyaalka Serie A.
Wejiyadii Kala duwanaa ee Buffon intii uu garoonka ku jiray
Marka laga hadlayo taariikhda Juventus, waxa uu shaki la’aan yahay goolhayaha ugu wanaagsan ee sooo maray taariikhda kooxda.
Sannadkii 2002 waxa uu ahaa goolhayaha xulka qaranka Talyaaniga ee Koobkii Adduunka ee lagu qabtay Korea iyo Japan, kaas oo ku hadhay gool wakhtigii dheeriga ahaa ay Koonfur Korea ka dhalisay. Goolka Talyaanigu ku hadhay oo loo yaqaanay Golden Goal, waxa la joojiyey maalintaas markii ay dad badan oo Talyaaniga u dhashay naxdin darteed u dhinteen.
Sannadkii xigay, Juventus waxay tagtay finalka Champions League oo ay iskugu soo baxeen AC Milan, waxaana rikoodheyaal ku qaadday AC Milan.
Xili ciyaareedkii xigay, xirfadda Buffon, waxay la kulantay dhibaatooyin, waxaana si xun u garaacday Juventus oo goolal cajiib ahaa uu Ryan Giggs uga dhaliyey tartanka Champions League ciyaar ka dhacday garoonka Old Trafford.
Sannadihii 2010 iyo 2014, waxa uu ahaa goolhayihii xulka qaranka Talyaaniga ee Koobka Adduunka, waxaana xusuus mudan in Euro si xun loogu bahdilay sannadkii 2012 markaas oo Spain ay 4-0 ku garaacday.
Waxa ugu xigay laba guul-darro oo finalka Champions League, waxaana u raacday in isaga oo funaanadda qarankiisa xidhan uu ku guul-darraystay in dalkiisa uu geeyo koobka adduunka 2018 kaas oo noqon lahaa markiisii shanaad ee uu koobka adduunka ka qayb-galo. Waxa Talyaaniga si xun u niyad-jebiyey oo ka badiyey wadanka Sweden.
Maalmo kaddib markii uu Talyaanigu ka hadhay Koobka adduunka, waxa uu Buffon u dhowaaqay inuu ka fadhiistay ciyaaraha Qaranka Talyaaniga ama ciyaaraha caalamiga ah.
Xirfaddiisa oo u badan murugadaas, waxa uu Buffon yahay shakhsi lagu qaato qiyaasta ama cabbirka goolhayeyaasha wanaagsan.
Oliver Kahn, Iker Casillas, Petr Cech ama Manuel Neuer, mid kasta waxa la yidhaahdaa, miyuu u wanaagsan yahay sida Buffon oo kale.
Waxa turjumay: Abdiwahab Ahmed Abeye